आहा ! रारा गोल्डकपमा एक विदेशीसहित १० टिमको सहभागिता हुने - Safal Awaj Safal Awaj
आहा ! रारा गोल्डकपमा एक विदेशीसहित १० टिमको सहभागिता हुने
पोखरा २६ पुस । आगामी माघमा आयोजना हुने बहुप्रतिष्ठित आहा ! रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको २० औं संस्करणमा एक विदेशी सहित १० टिमको सहभागिता रहने भएको छ ।
क्लबका अध्यक्ष हरीराम गुरुङ ‘सुरज’ ले १६ हजार ५ सय सिट क्षमता भएको रंंगशालामा सामाजिक दुरी कायम गरी थोरै दर्शकको उपस्थितिमा भएपनि प्रतियोगिता आयोजना गरिने बताए । प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्य सचिव तेज गुरुङले सहारा क्लब धेरै नागरिकहरुका लागि सहारा बन्न सफल भएको भन्दै प्रतियोगिताको पूर्ण सफलताको कामना गरे । हिमश्री फुड्सका प्रवन्ध निर्देशक किरण केसीले क्लब र एकेडेमीका लागि सदैव सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले आफ्ना बुबाको दोहान्तपछि पनि सहयोगलाई निरन्तरता दिइएको र आफू पछिका पुस्तामा समेत यसलाई हस्तान्तरण गरिने बताए ।